Uganda oo iska ilaalineysa weerarro Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Uganda ayaa sheegtay inay si aad ah u adkeysay ammaanka dalkeeda, kaddib markii ay heshay hanjabaadyo uga timid Al-shabaab, horayna ay safaaradda Mareykanku uga digtay.
“Mar hore ayaan helnay hanjabaay, innaguna waxaan talooyin siinnay shacabka,” ayuu yiri Ankunda.
“Waxaan diyaar u nahay inaan ka hortagno wax walba oo khatar ku ah dalkeenna iyo dadkeenna” ayuu sidoo kale ayuu yiri Ankunda.
Safaaradda Mareykanka ee Uganda ayaa dhawaan uga digtay muwaadiniinteeda khatar uga imaan karta gudaha dalkaas.
Xarakada Al-shabaab ayaa sannadkii 2010-kii laba qarax oo ismiidaamin ahaa ka geystay magaalada Kampala, qaraxyadaas oo ay ku dhinteen 76-qof oo u badan dad daawanayay ciyaaro kubadda cagta ah.